Domačija FERI - Brda, Breakfast ifakiwe - I-Airbnb
Domačija FERI - Brda, Breakfast ifakiwe
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguDiana
Le ndlu ikwilali yaseHum kwaye ijonge kwizidiliya ezikufutshane. Ifulethi elibanzi (115 m2) lilungele iintsapho kunye nezibini okanye amaqela amancinci ukuya kuthi ga kwi-5. Indawo yokupaka yasimahla kwizakhiwo zeemoto ezi-2.
Ivenkile yegrosari ethi “FAMA” kunye nendawo yokutyela ethi “Briška hisša” ziyafikeleleka ngeenyawo.
** IINDWELE EZINYE**: ngelishwa asinakho ukwamkela iindwendwe ezingatshatanga ngenxa yobukhulu bendlu.
I-Homestead Feri ikumbindi wengingqi yeGoriška Brda, kwilali yaseHum.
I-ambient yangaphakathi iyilwe ngendlela "ye-mediterranean", enendawo yokuhlala eqaqambileyo nephangaleleyo enegumbi lokutyela kunye nekhitshi labucala. Indawo yokulala inamagumbi amabini atofotofo anegumbi lokuhlambela elinye. I-terrace iyafikeleleka ukusuka kwigumbi lokuhlala kwaye ijonge indawo enenduli.
IGoriška Brda ngummandla owaziwa kwihlabathi jikelele ngewayini zayo, ngakumbi iRebula, eveliswa ngabenzi be wayini balapha. I-Hilly landscape enemizi, imozulu ye-Mediterranean kunye nokutya kwendawo kunye neoli yeoli kunye newayini kwindawo yokuqala, yenza kube yinto ekhethekileyo.
Nceda uqhagamshelane nathi.
Sinikezela ngolwazi olongezelelweyo (into omawuyibone, omawuyenze) emnyango.